Man United oo quus ka muujineysa Antoine Griezmann…(Xiddigahan ayay iminka diirada saareysaa) – Gool FM
Man United oo quus ka muujineysa Antoine Griezmann…(Xiddigahan ayay iminka diirada saareysaa)
Byare March 7, 2017
(Manchester) 07 Mar 2017. Manchester United ayaa iminka bilowday inay baaritaano u gasho sidii ay u heli lahayd weeraryahano kale kaddib markii uu aad u adkaaday soo iibsashada dhaliyaha Atletico Madrid Antoine Griezmann.
Weerararyahanka Monaco Kylian Mbappe iyo midka Bayern Munich Robert Lewandowski ayay iminka ka fikireysaa Red Devils sidii ay ugu dhaqaaqi lahayd.
Griezmann ayaa ahaa bartilmaameedka koowaad ee Old Trafford xagaaga soo socda laakiin jariiradda The Independent ayaa ogaatay in heshiiskaasi uu aad u adkaaday isla markaana ay kooxda Jose ku fikirayaan dooqyo kale.
Kooxda ka dhisan caasimaada Madrid ayaa gabi ahaan dooneyn inay iska iibiyaan dhaliyahooda kaddib garoonka cusub ay dhawaan dhisteen, yeelkeede Jose Mourinho ayaa isna la sheegayaa inuu weli doonayo laacibka iskuna dayi doono inay wax uun dhacaan.
Ancelotti oo amaanay Wenger ka hor kulankooda caawa
"Uma ogolaanayno Real Madrid inay nastaan" - Tababare Maurizio Sarri